Ndị ọkaiwu mba ofesi na Netherlands - Law & More
Iwu mbata na ọpụpụ na-ahazi ihe metụtara nnabata, ebe obibi na mbula nke ndị ọbịa. Alsmụ amaala mba ọzọ abụghị ndị mba Dutch. Ndị a nwere ike ịbụ ndị gbara ọsọ ndụ, kamakwa ndị ezinaụlọ nke ndị biburu na Netherlands. Ha nwekwara ike bụrụ ndị chọrọ ịbịa na-arụ ọrụ na Netherlands.
N'AGBAR OF OBI LBỌR I AHMḾ?
Nweta ebe a LAW & MORE
> Itinye akwụkwọ maka ikike obibi
> Itinye akwụkwọ maka amaala Dutch
> Ijikọ ezinụlọ
> Mbugharị oru
> Ezigbo ndị kwagara mba ọzọ
Ndị ọka iwu mbata na ọpụpụ mbata na ọpụpụ ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye akwụkwọ ikike obibi ma ọ bụ ngwa naturalization maka onwe gị, onye gị na ya na-emekọ ihe, onye ezinaụlọ gị ma ọ bụ onye ọrụ. Law & More nwere ike inye gị ndụmọdụ ma ọ bụ nwee ike iwepụta akwụkwọ maka ikike obibi gị niile. Ọ bụrụ na ajụrụla akwụkwọ anamachọihe gị, anyị nwekwara ike inyere gị aka idobe mkpesa maka mkpebi nke Ndị Ọrụ Immigrashọn na Nchịkwa Ọchịchị Dutch (IND). You nwere ajụjụ maka otu n’ime ndị ọka iwu mbata na ọpụpụ ọka iwu anyị? Ọ bụrụ otú ahụ, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka.
Ihe atụ nke isiokwu ndị anyị nwere ike inyere gị aka bụ:
• Akwụkwọ ikike obibi;
• Ijikọ ezinụlọ;
• Mbugharị nke ndị ọrụ;
• Ndị ọchọrị siri ike.
nzukọ, atụmatụ doro anya
Itinye akwụkwọ maka ikike obibi
Ikike obibi oge nile na-agụnye ikike obibi niile ewezuga akwụkwọ ikike mkpuchi ebe obibi. IND metụtara iwu nnabata. Achọrọ arịrịọ maka ụlọ obibi naanị site na IND ma ọ bụrụ na emezughị ọnọdụ ndị ahụ. Ndị ọka iwu mbata na ọpụpụ ọka iwu nwere ahụmịhe itinye akwụkwọ maka ụdị ikike obibi dị iche iche. Anyị nwere ike itinye akwụkwọ maka ikike obibi ndị a:
• Akwụkwọ ikike obibi maka njikọta ezi na ụlọ;
• Ighazi ikike obibi onwe gị;
• ikike obibi nwa amaala EU;
• Akwụkwọ ikike maka ndị si mba ọzọ nwere nghọta;
• Ọmụmụ akwụkwọ nyocha akwụkwọ nyocha / afọ nyocha;
• Ogologo oge obibi obibi;
• Akwụkwọ ikike maka obibi
• Ikike nke ọnụnọ nwa oge (MVV).
Ndị ọka iwu mbata na ọpụpụ kwadebere maka gị
Ọ ga-amasị gị ibi na Netherlands?
Gị na ezinụlọ gị anọghị, ka ọ̀ bụ na ezinụlọ gị anọghị? Chọpụta ihe anyị nwere ike imere gị
Want chọrọ ịrụ ọrụ ma biri na Netherlands? Anyị nwere ike ịhazi usoro ntinye akwụkwọ niile
Ezigbo ndị kwagara mba ọzọ
Want chọrọ ka onye ọrụ mba ọzọ rụọ ọrụ na iwu na Netherlands? Kpọtụrụ gị
Itinye akwụkwọ maka amaala Dutch
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ịchọrọ ịbụ onye amaala Dutch, a ga-etinyerịrị akwụkwọ maka inweta ọnọdụ natara. Ọ na-esikarị ike ikpebiri onwe gị ma ị tozuru oke maka inweta akwụkwọ ndụ. Enyemaka nke ezigbo ọka iwu mbata na ọpụpụ ọ dị mkpa, n’ihi na ọnọdụ na-adịkarị mgbagwoju anya. Fulnesskpachara anya na usoro ntinye akwụkwọ dị mkpa maka ngwa ihe ịga nke ọma. Need chọrọ enyemaka maka itinye akwụkwọ maka agbụrụ Dutch? Law & More na-enye gị nkwado ziri ezi ma na-akwado gị n'oge usoro ahụ dum. .
Ọnọdụ ejikọtara ọnụ dịkwa maka njikọta ezinụlọ. Ọ bụrụ na emezighi ọnọdụ, a ga-ajụ akwụkwọ anamachọihe ahụ. Ndị otu ezi-na-ụlọ a tozuru oke maka ijikọ ezinụlọ.
• nwunye ma ọ bụ di;
• onye ya na ya debanyere aha ya;
• onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye;
• obere ụmụaka.
Otu n’ime ọnọdụ maka ijikọ ezinụlọ bụ na onye chọrọ ya na onye ezinaụlọ ahụ ga-abụrịrị afọ 21. Na mgbakwunye na ndị di na nwunye, ndị mmekọ, ndị edebanyere aha, ndị na-alụghị di na nwunye na obere ụmụaka, ndị nwoke na nwanyị (ndị na-abụghị di na nwunye) nwere ike iru eru maka njikọta ezinụlọ.
Ọ ga-amasị gị ịbịa Netherlands ịrụ ọrụ ebe a dị ka onye ọsụsọ nke nwere ọgụgụ isi, onye na-arụ ọrụ onwe ya ma ọ bụ ịnọ ebe a obere oge na visa azụmahịa? Ndị ọka iwu mbata na ọpụpụ na-enye ndụmọdụ ma ndị ọrụ na ndị were ọrụ maka ohere enwere ma duzie ha site na ntinye akwụkwọ.
Otu n’ime ụzọ kachasị mma iji mee ka onye ọrụ si mba ọzọ nọrọ ma na-arụ ọrụ na iwu na Netherlands bụ itinye akwụkwọ maka ikike obibi dịka onye ọchụnta ego nwere nnukwu ọpụpụ. N'ụdị ahụ, achọrọghị ikike ọrụ. Otu ọ dị, ọnọdụ bụ na edebanyere ọrụ na Netherlands dị ka onye kwadoro IND. Na mgbakwunye, ọ dị mkpa na onye kwagara mba ọzọ nwere ikike ị nweta ego chọrọ. Ndị otu ọpụpụ ọka iwu ọpụpụ nwere ike inyere gị aka ma anyị nwere ike itinye akwụkwọ maka nnọchite gị na IND. Ọ ga-amasị gị nke a? Biko kpọtụrụ Law & More.